Dariiqay Liverpool U Soo martay Finalka Champions League?
Liverpool ayaa xili ciyaareedkan dariiq aad u adag u soo martay finalka UEFA Champions League waxayna guud ahaan soo ciyaartay 12 kulan oo Champions League ah kuwaas oo ay 7 ka mid ah soo guulaysatay halka 4 guuldaro iyo hal barbaro ay soo heshay.
Liverpool ayaa 22 gool ka soo dhalisay 12 kii kulan ee ay xili ciyaareedkan ka soo ciyaartay Champions League waxaana kooxdeeda laga soo dhaliyay 12 gool.
Liverpool ayaa kaalinta labaad kaga soo baxday Group C kadib markii ay Anfield ku garaacday kooxda Napoli oo ay cadaadis badan kala kulmaysay waxayna sidoo kale Reds heerkii groupyada ay la soo ciyaartay PSG oo ay hal guuldaro iyo hal guul ah ka heshay.
Kadib Liverpool waxay imtixaan aad u adag ku martay wareegii 16kii kooxood ee Champions League oo ay isku dhaceen Bayern Munich. Liverpool ayaa Bayern ku soo garaacday wadarta labada kulan oo 3-1 ah iyada oo isla natiijadani ahayd tii ay Reds ugu soo baxday kulankii Allianz Arena ee lugtii labaad.
Balse Liverpool ayaa si raaxo leh ku soo dhaaftay siddeed dhamaadkii Champions League kadib markii ay kooxda FC Porto marti iyo minanba ku tuntay waxayna wadarta labada kulan ee siddeed dhamaadkii kaga soo gudubtay 6-1.
Kadib waxay Liverpool martay imtixaankii ugu danbeeyay uguna adkaa ee afar dhamaadkii Champions League waxayna kulankii lugtii hore guuldaro 3-0 ah kala soo laabtay Barcelona kulankii Camp Nou.
Laakiin soo laabashadii layaabka lahayd ee Anfield ayay Liverpool ku awooday in ay natiijada hore ku badashay iyada oo 4-0 ku xasuuqday Barcelona sidaa ayayna Liverpool ku soo gaadhay finalka Champions League.
Liverpool waxaa gool dhalinta kooxdeeda ee Champions league hogaaminaya Roberto Firmino, Sadio Mané iyo Mohamed Salah oo min afar gool soo dhaliyay.